नायक खोजीमा थकित ऋषी धमला पत्नीको कस्तो रहला यी नायकसँगको रोमान्स !! « News24 : Premium News Channel
नायक खोजीमा थकित ऋषी धमला पत्नीको कस्तो रहला यी नायकसँगको रोमान्स !!
पत्रकार ऋषि धमला पत्नीले निर्माण तथा अभिनय गर्ने लागेको चलचित्र ‘अनुराग’को चर्चा जति चलचित्र औपचारिक घोषणा सुरु हुनु अघि थियो त्यो भन्दा बढि चलचित्रमा खेलाइने नायकहरुले एक पछि अर्को गर्दै चलचित्र खेल्न अस्विकार गर्नुले चर्चा कमाएको छ ।
केही समय अघि पत्रकार पत्नि एलीजा गौतम र मोडल दीपक घिमिरे नायक नायीका हुने गरी चलचित्र अनुरागको औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको थियो । तर निर्माण घोषणा गरिएको हप्ता दिन नबित्दै नायक दीपक घिमिरेले चलचित्रबाट हात झिके । दीपक चलचित्रबाट बाहिरिए पछि निर्माण टिमले अन्य नायकहरु सँग चलचित्रको प्रस्ताव राखे । नायकको खोजीको क्रममा निर्माण युनिट नायक पल शाहसम्म पुगे । पलले एलिजासँग रोमान्स गर्ने पक्का भएको समाचारहरु पनि बाहिरिएका थिए ।
तर केही समय नबित्दै पल पनि ‘अनुराग’बाट बाहिरिए । तिहार पछि फ्लोरमा जाने तयारीमा रहेको चलचित्र युनिटले हाल नयाँ नायकलाई भेटेको छ । नव नायकको रुपमा चलचित्र ‘अनुराग’बाट समुन्द्र पण्डितले रोमान्स गर्ने पक्का भएको छ ।
गत बिहिबार लक्ष्मीपुजाको अवसर पारेर चलचित्र ‘अनुराग’टिमले दक्षिणकाली पुगेर स्क्रिप्ट पुजा गरेको थियो । सोही समय निर्माण पक्षले चलचित्रको नायकलाई बाहिर ल्याएको हो ।
बाँकेको राप्ती सोनारीमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक महिलाको मृत्यु